आज, मालिश को धेरै प्रकार छन्। यांत्रिक शरीर मालिश अन्तर्गत हात, खुट्टा, वा विशेष उपकरणहरू को मद्दतले दाह बुझ्छु। दिन मान्छे को अन्त मा अक्सर "aching" मांसपेशिहरु मा दुखाइ को रूप मा बेचैनी को भावना छ, शरीर आफ्नो लचीलापन, अर्थात् अनुपलब्ध। ई दोषपूर्ण सुरु हुन्छ। यो राज्य बाहिर लैजान मालिश गर्न मद्दत गर्छ। कसरी फिर्ता मालिश र यो प्रक्रिया एक ताजा र invigorating प्रभाव एकदम धेरै लेखिएको छ प्राप्त।
तपाईं व्यावसायिक masseurs को सेवाहरू प्रयोग गर्छन् भने तरिकाहरू सिक्न धेरै सरल हुन सक्छ सामान्य मालिश को। सबैभन्दा यो प्रक्रिया को सबै प्रकार लोकप्रिय फिर्ता मालिश, र घर मा के छ गाह्रो छैन। एक फिर्ता मालिश कसरी बनाउने? यस्तो प्रश्न यस्तो कदम मा पहिलो पटक निर्णय गरेको छ जो एक व्यक्ति लागि प्राकृतिक छ। व्यक्ति को पछाडि शरीर को लगभग सबै भागहरु सम्बन्धित स्नायु रिसेप्टर्स को एक विशाल संख्या छ।
तसर्थ, प्रक्रिया फिर्ता मालिश ठूलो लाभ प्रदान गर्दछ र शरीर को रिकभरी योगदान पुग्छ। जबकि यो सामान्यतया एक प्रविधी सीमित छैन क्लासिक मालिश, प्रक्रियाहरु सञ्चालन मा एक निश्चित अनुक्रम मान्छ।
Massaged आफ्नो पेट मा राखे, अलिकति पनि कुहिनो मा बाङ्गो शरीर साथ आफ्नो हात राख्नु, टाउको एक पक्ष गर्न पारिएको छ। को टखने भाग अन्तर्गत आवश्यक भएमा, एक लोचदार सामाग्री बनेको एक रोलर राख्न। Masseur सामान्यतया हिप स्तर झूट बाँया पक्षमा स्थित छ।
को मालिश सुरु गर्नु अघि, यो क्रीम वा तेल पछाडि चिकनाना गर्न मनमोहक छ। कसरी आफ्नो मालिश फिर्ता र कुनै हानि गर्न? को मेरुदण्ड पकड देखि घाँटी Palms स्लाइड गर्नुहोस्। अर्को आन्दोलन गर्ने गर्न छेउमा सतहहरु द्वारा बाहिर काँध जोइन्टहरूमा। यी आन्दोलनहरु क्रीम (तेल) गर्न धेरै पटक दोहोर्याइएको गर्दै फिर्ता मार्फत समान रूप फैलाउन छ।
कसरी आफ्नो फिर्ता मालिश? आदि stroking, सानना, दल्नु, पेट, Hack, कम्पन, ..: सामान्यतया निम्न तरिकाहरू यस उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ
प्रक्रिया मालिश स्ट्रोक सुरु हुन्छ। घाँटी गर्न sacrum देखि स्ट्रोक को दिशा, अलग भएको Palms मा काँध ब्लेड। को कमर Stroking को मेरुदण्ड देखि सीधा कमर र तिध्रा बिचको भाग को लसीका नोड्स तिर सुरु हुन्छ। को काँध संयुक्त गर्न संक्रमण मा प्रक्रिया टाउको को विपरीत परिक्रमा को काँध बाट सुरु हुन्छ कि सम्झना गर्नुपर्छ।
पूर्ण विश्राम गर्न फिर्ता मालिश कसरी बनाउने? ब्लेड मांसपेशीमा सानना को चरण जाँदै गर्दा यो विशेष महत्त्वपूर्ण छ। यस मामला मा हामीले सङ्कलन र scapula वरिपरि मांसपेशिहरु को भागहरु, आन्दोलनहरु एक सर्कल मा प्रदर्शन गर्दै छन् संकुचन एक द्वारा एक हात छ। अर्को चरण घाँटी को आधार मा सुरु हुन्छ। आन्दोलनहरु बिस्तारै औंठी प्रदर्शन, तर पर्याप्त शक्ति को आवेदन छन्। थप फिर्ता massaging तल मेरुदण्ड साथ औंठी जारी छ।
को मेरुदण्ड साथ चाँडै र कडा बिन्दु मा क्लिक, औंलाहरु फिर्ता को बीचमा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ, र त्यसपछि घाँटी को आधार फिर्ता स्लाइड। को काँध ब्लेड वरिपरि मालिश गर्दा अर्कोतर्फ तल काँध धारण एक हात को औंलाहरु, क्षेत्र massaged छ। यो प्रक्रिया सानना र काँध को शीर्ष तलतिर सार्दा गर्दा थिचेर बाहिर छ। को ब्लेड औंलाहरु को समतल सतह बनाउन मा एक परिपत्र गति, सर्कल सानो हुनुपर्छ।
इच्छित परिणाम प्रत्येक प्रविधी धेरै पटक प्रदर्शन हुनुपर्छ प्राप्त गर्न। फिर्ता मालिश सुस्त भावना 10 मिनेट अगाडि बीच पछिल्लो गर्नुपर्छ। र massaged मा बेचैनी र पनि अधिक पीडा देखाउन हुँदैन। यो स्पाइनल मालिश समयमा आवश्यक छ। को मालिश सत्र सुरु किनभने चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्न आवश्यक छ अघि मालिश, साथै प्रभावित गर्न कुनै पनि शक्तिशाली तरिका, यसको सीमितता छ।
सेन्ट पीटर्सबर्ग, चिकित्सा केन्द्र "राजवंश": समीक्षा र फोटो
को ग्रीवा नहर Probing: विवरण, विशेषताहरु र नतिजा
आरएच-संघर्ष के हो?
एक बच्चा प्रायः नाक रक्त जान्छ भने
आकस्मिक कक्ष। प्रवेश कार्यालय। छोराछोरीको आपतकालीन विभाग
बोरिक एसिड कान छ - राम्रो घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने!
नोवोरोसीस्क - Gelendzhik: दूरी कसरी प्राप्त गर्न
फंगल: छाला को mycosis